Akụkọ - Kedu otu esi ahọrọ ahịhịa ịcha afụ ọnụ nke dabara gị?
Nhazi ahịhịa ahịhịa
Ihe nhicha ihe
Ntụ ntụ ntụ
Ahịhịa egbugbere ọnụ
Nku nku anya
Blender mara mma
Powder ntụ ntụ
Nchacha ahịhịa etemeete
Belt etemeete etemeete/akpa
Ngwaọrụ/Ngwa ndị ọzọ etemeete
Eserese Palette etemeete
Nchacha afụ ọnụ
Nchacha ahịhịa Ntọala
Akpụcha isi ahịhịa
Aka ịcha ahịhịa
Ngwaọrụ afụ ọnụ
Akpụ afụ ọnụ
Ọkpụkpụ afụ ọnụ/iko
Ịkpụ afụ ọnụ
Ntucha afụ ọnụ
Mkpa afụ ọnụ
Kedu otu esi ahọrọ ahịhịa ịcha afụ ọnụ nke dabara gị?
Enwere ọtụtụ narị ụdị brushes n'ahịa, nke dị ọnụ ala bụ 30, ọnụ ahịa ya sitere na puku abụọ ruo puku atọ ma ọ bụ karịa. Otu ihe ahụ bụ ahịhịa, kedu ihe dị iche? Ọ dị mkpa imefu ọtụtụ puku dollar na ahịhịa maka obere nkeji 1 kwa ụbọchị? Ma ọ bụ mmadụ nwere ike zụta yuan iri na abụọ dị ọnụ ala karịa iji nwee otu mmetụta ahụ?
Enwere ọtụtụ ihe ọmụma gbasara ịcha afụ ọnụ, ka anyị gụkọọ ya ọnụ taa, ka anyị jiri nnwale nke anyị kwuo maka ya!
N'ime usoro ịkpụ afụ mmiri, isi ọrụ nke ahịhịa bụ ịfụfụfụfụfụfụ, tinyekwa ya ihu. Nzọụkwụ abụọ a bụkwa akụkụ nke ihe na -atọ ụtọ n'oge ịkpụ afụ ọnụ.
Ntucha ahụ nwere ike inyere gị aka ịmepụta ụfụfụ bara ụba na nke siri ike site na ude afụcha ma ọ bụ ncha iji kpuchie afụ ọnụ gị kpamkpam.
Ahịhịa na -enyere aka mee ka ajị agba dị nro ma mee ka akpụkpọ ahụ mee ka ọ dị nro, na -ezere mgbakasị agụba na mmebi akpụkpọ ahụ mgbe anụ ahụ na -adịghị arahụ. Ịdị mma nke ahịhịa ahụ nwere ike banye n'ime oghere ọ bụla, unyi dị ọcha, wee wetara gị mmetụta na -enye ume ọhụrụ. Ezi ma ọ bụ ihe ọjọọ nke ịkpụ afụ ọnụ nwere ike iwetara gị mmetụta dị iche n'etiti eluigwe na ụwa.
Ka ọ dị ugbu a, a na -ekewa brushes ndị dị n'ahịa ụzọ atọ: ntutu sịntetik eriri, bristles boar, ntutu badger.
Fiber sịntetik ntutu:
Ntutu sịntetik sịntetik, dabara maka ụfọdụ ụmụ nwoke na -enwe nfụkasị ntutu anụ ma ọ bụ ndị na -echebe anụmanụ.
a na -ekewa ntutu sịntetị eriri ka ọ dị mma na ihe ọjọọ. Isi ntutu sịntetik eriri adịghị mma siri ike ma ọ nweghị ikike ịmịkọrọ mmiri. Agbanyeghị na ọ na -esiri gị ike ịkwanye n'ime nnukwu efere, ọ siri ike ịme ụfụfụ. Ihu nke elu na -adị ka ị na -eji broom na -ete ihu na ihu, ị nwekwara ike na -eche ihe mgbu nke ịtinye.
■ A na-eji ajị mgbochi ajị agba agba ajị anụ, ntutu ya esikwa ike.
Uru: ọnụ ala! Ọ dịghị uru ma e wezụga ịbụ ọnụ ala.
Advant Ọghọm: Ọ na -esi ike ịfụfụ, ọ na -egbu mgbu n'ezie karịa obi na -afụ ụfụ.
Kedu ntutu ntutu sịntetik kacha mma?
Site n'ọganihu nke teknụzụ ọgbara ọhụrụ, ntutu sịntetik eriri afọ amalitela inwe ịdị nro dị ka ajị ajị, agbakwa ajị agba ka ọ yie nke ajị ajị, ikike ịmịkọrọ mmiri abawanyela mma. Mana ọnya ọnya ka chọrọ obere ndidi, ewezuga ụkọ mmiri ịmịkọrọ mmiri. N'ihi na ọ dị nro dị ka ajị ajị, ihu elu na -enwe ahụ iru ala karịa, na -enweghị mmetụta nke ịkpọpu. Ọ bụrụ na ntutu anụ anụmanụ na -akpasu gị iwe n'ezie ma hụkwa nchekwa anụmanụ n'anya, ị nwere ike họrọ ezigbo ntutu sịntetik eriri iji wee nwee mmetụta.
Ma ọ bụ ezigbo ntutu sịntetik ma ọ bụ ntutu sịntetik siri ike, enwere nsogbu nkịtị, ya bụ, a ga -enwe obere ntutu na ntutu isi. N'ozuzu, a na -atụ aro ka edochie otu n'ime ihe dị ka otu afọ.
■ A na-eji ajị mgbochi ajị agba agba ajị, ntutu dị nro.
Uru: akwa nro.
■ Ọghọm: mmịpụta mmiri na -adịghị ike, ogologo oge ụfụfụ na ntutu isi.
Akpụkpọ anụ boar:
Ntucha afụ ọnụ nke bristles boar dabara adaba maka ụmụ nwoke na -amalite ịmalite ịkpụ afụ mmiri. Ntutu isi siri ike karịa eriri na ajị ajị, nke nwere ike ihicha akpụkpọ ahụ nke ọma. Ikike mkpọchi mmiri nke anụ anụmanụ na-eme ka ọ dị mfe ịfụfụ.
Na mgbakwunye na obere ntụpọ na -adịchaghị mma, mgbe ụfọdụ a ga -enwe mmetụta mgbu nke ịrapara n'ahụ. Mgbe ogologo oge nke iji ya, ntutu ga -eji nke nta nke nta dezie ma kewaa.
Agba ntutu bụ beige dị ọcha, ntutu na -adịkwa obere.
Uru: ntutu anụmanụ nwere ikike ịkpọchi mmiri nke ọma na ọfụfụ.
Advant Ọghọm: ọ naghị adị nro, ntutu ga -emebi, ntutu nwere ike ịda.
A na -emekarị ya ntutu site n'akụkụ dị iche iche nke anụ “badger”. Anụmanụ a na -ahụ ya naanị na Northeast China na Alps Europe na ụwa. Maka na ọ dị ụkọ na dị oke ọnụ ahịa, ọ bụ ihe kacha atọ ụtọ nke onye ọ bụla na -agaghị e imitateomi na ahịhịa.
Ntutu badger na-amịkọrọ mmiri nke ukwuu na mkpọchi mmiri na ntutu anụmanụ, nke dabara adaba maka ịkpụ afụ ọnụ. Naanị ntakịrị mmiri nwere ike ime ụfụfụ bara ụba nke ukwuu. Ịdị nro bụkwa ọkwa ọhụrụ nke enweghị ike iru ma e jiri ya tụnyere bristles boar na ntutu sịntetik ntutu. Ọ na -eweta mmetụta na ịchọghị ịgbanwe brushes ndị ọzọ mgbe i jisịrị ya.
N'ezie, a na -ejikwa ntutu ewi ede akara, akụkụ dị iche iche nke ntutu na -enwekwa mmetụta dị iche iche.
■ Agba eke nke ajị anụ dị nro nke ukwuu.
Uru: Ikpọchi oke mmiri, ụfụfụ bara ụba na nke siri ike, ntutu dị nro, dị mma na ihu.
Advant Ọghọm: ọnụ ahịa dị elu.
Ntutu badger dị ọcha:
A na -eji ihe ka ọtụtụ n'olu badger, ubu, ogwe aka ya, na ntutu dị n'ime ya nke esiri ike siri ike karịa akara akara ajị anụ ndị ọzọ. Ọ dabara adaba maka ndị egwuregwu chọrọ naanị ịkpọtụrụ ajị ajị anụ. Ọkwa ọkwa ịkpụ afụ ọnụ dịkwa ọnụ ala.
Ụdị ntutu kacha mma:
Eji ntutu dị nro dị 20-30% mee ya n'akụkụ dị iche iche nke baajị, nke ga-adị nro ma dịkwa mma karịa ntutu dị ọcha. Ọ dabara maka ndị egwuregwu chọrọ ịkwalite n'ọkwa ọzọ mgbe ha metụchara ntutu ntutu baajị.
Ntutu Super Badger:
Nnukwu badgers bụ ajị ajị nke dị oke ọnụ karịa "kacha mma" ma ọ bụ "dị ọcha". Emere ya 40-50% ntutu dị n'azụ beji. Elu ya dị elu na-adịchaghị ọcha. Ọ na-abụkarị ntụcha ọchacha nke ntutu dị ọcha “dị ọcha”.
Ntutu badger Silvertip:
Isi ntutu kacha elu bụ ntutu kacha baajị kacha mma. Ejiri ntutu dị 100% mee ya n'azụ. Akụkụ ntutu a dịkwa ụkọ nke ukwuu, yabụ ọnụahịa dịtụ mma karịa. N'elu ntutu bụ agba ọcha na -acha ọla ọcha, ntutu dị nro mgbe ejiri ya, mana ọ naghị efufu ya. Na Europe, ndị ọkaibe na ndị ọchụnta ego bara ọgaranya ga -ahọrọ brọsh kacha elu iji gosipụta njirimara ha.
Nhọrọ ahịhịa dị iche iche ga -ewetara gị ahụmịhe ịkpụ afụ ọnụ dị iche. Ma ọ na -ata ahụhụ ma ọ bụ okomoko, ọ dabere na nhọrọ gị.
Oge ezipụ: Aug-03-2021
E hiwere Shijiazhuang Dongmei Brush Co., Ltd. na 1986. Ọ bụ ụlọ ọrụ na -emepụta etemeete na ịkpụ afụ ọnụ na ijikọ ahịa/imewe na mmepụta.
Anyị na-emepụta maka ahịhịa etemeete dị elu & ụdị ịkpụ afụ ọnụ OEM na mba ndị mepere emepe na Europe na United States, na-ahazi mmepụta ODM maka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke obere, ọkara na nnukwu ndị ahịa.
Shijiazhuang Dongmei ahịhịa Co., Ltd.
Copyright - 2010-2021: Ikike niile echekwabara. Ngwaahịa na -ekpo ọkụ, Map saịtị
Ngwá Ọrụ Nchacha etemeete, Mee Ncha, Ịkpụ afụ ọnụ, Ntọala ịkpụ afụ ọnụ, Nịm etemeete ahịhịa, etemeete ahịhịa setịpụrụ,